CafeSuite 3.54.5 with crack ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မေး Htun Naingး​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ခင်​ဗျား ​ကျွန်​တော် ​တစ်​ခု​လောက် ​အ​ကူ​အ​ညီ ​တောင်း​ချင် ​လို့​ခင်​ဗျား CafeSuite Software ​လေး ​လို​ချင် ​ပါ​တယ် ​ခင်​ဗျာ ​နောက်​ပြီး ​အ​သုံး​ပြု​ပုံ​လေး ​ပါ ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ.
​အ​သုံး​ပြု​နည်း​က​တော့ ​နောက်​ပိုင်း ​သတ်​သတ်​တင်​ပေး​ပါ့​မယ်. ​ကျွန်​တော် ​ပြန်​စမ်း​ရ​မှာ​မို့​ပါ. ​အ​ခု​တော့ software ​နဲ့ crack ​ကို ​တစ်​ခါ​တည်း ​တွဲ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​အ​ထဲ​မှာ ​သုံး​မျိုး​တင်​ထား​ပေး​ပါ​တယ်. ​တစ်​ခု​က crack ​မ​လို​တဲ့ version ​ပါ. ​နောက်​တစ်​မျိုး​က crack ​ထည့်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​နောက်​တစ်​ခု​က version 3.5 ​ပါ. ​အ​ဆင်​ပြေ​တာ​နဲ့​သာ ​သုံး​လိုက်​ပါ. ​ထိုင်း​မှာ​တော့ ​ဒီ​ကောင်​လေး​ကို ​သုံး​ကြ​တာ ​တော်​တော် ​များ​များ ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ်. ​အ​လုံး​ရေ​တော့ ​ကန့်​သတ်​ထား​ဟန် ​မ​တူ​ပါ​ဘူး. ​အ​ဆင်​ပြေ​တယ်​မ​ပြေ​ဘူး. commant ​ရေး​ပေး​ခဲ့​ပေး​ပါ. ​အဲ့​ဒါ​မှ ​ကျွန်​တော် ​ဘယ်​လို ​လုပ်​ပေး​သင့်​တ​ယ​ဆို​တာ​ကို ​ဆုံး​ဖြတ်​လို့​ရ​မှာ​မို့​ပါ.
cafesuite ​အ​သုံး​ပြု​နည်း userguide ​ကို ​လို​ချင်​ရင်​တော့ ​ဒီ​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ.
San Shwe Tun September 25, 2011 at 8:23 PM
​အ​ကို​ရေ rar ​တွေ​ဖြေ​တော့ pass ​တွေ​တောင်း​တယ်​အ​ကို​ရေ ​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး
Torn. Torncity June 23, 2013 at 12:14 AM
software ​ပါ​ဘူး​ဗျ bro ​လို​ချင်​လို့ ​ပါ link ​နောက်​ခါ​တင်​ပေး​ပါ​ဗျ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်
saimario September 16, 2013 at 10:39 PM
​အ​ကို​ရေ cafesuit ​နဲ့ surfovisor ​တွဲ​သုံး​တဲ့​နည်း​လေး​သိ​ချင်​လို့​ပါ
saimario September 16, 2013 at 10:44 PM
​ကြိုက်​တယ် ​မ​ကြိုက်​ဘူး ​သ​ဘော​ထား​လေး ​ပြော​ပေး...